Devil's Hunt: Ciyaaraha Layopi 'Dabeyli Lahin May Cry - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Devil's Hunt: Dabeylaha Polish ayaa laga yaabaa inay qeyliyaan Ciyaaraha Layopi
Devil's Hunt: Dabeylaha Polish ayaa laga yaabaa inay qeyliyaan Ciyaaraha Layopi
Isuduwidda ciyaarta video ee Pawel Lesniak's 'Equilibrium' wuxuu ku yaalaa demo dheer oo ka hor inta uusan imaan xagaaga PS4, Xbox One iyo PC.
Mashruucii ugu horeeyay, studio Ciyaaraha Laytopia wuxuu ujeedkiisu yahay in uu ka sareeyo bilawga, inkasta oo ay jirto dhaqaale xumo, iyo balanqaad "guulo tayo sare leh, ciyaaraha casriga ah iyo sheeko jilicsan". Sida mashruuca CD Projekt RED uu la sameeyey Wiiidhaha Witcher, urur madaxbannaan oo ku saleysan Warsaw wuxuu ku dhiirigeliyay novel Polish inuu nolosha siiyo Devil's Hunt. Cayaartan waxqabadka ah ee qofka saddexaad ayaa xajiyey muran u dhexeeya malaa'igaha iyo jinniyada. Halyeeyga Desmond ayaa si dhakhso ah u heli doona qalbigiisa oo dhan: "Markii uu waayeelka iyo wiilka ganacsadaha leh, Desmond wuxuu la kulmay dhacdooyin taxane ah oo u horseeday inuu lumiyo badi bini'aadamnimadiisa. Waxa uu ku dhuftay awoodaha jinniga oo uu u hoggaansamey in uu noqdo dambiilaha jahannamada, wuxuu raadsanayaa meesha uu ku jiro dagaalka dagaalka ka dhex socda: labadaba burburiyaha iyo badbaadiyaha, wuxuu u dhaqaajiyaa harraad si uu uga aarguto qaybtiisa weli bini'aadanku waxay ku dadaalayaan inay xanaaqaan Wuxuu si adag ula dagaallamayaa feerihiisa iyo cirridkiisa, isaga oo ka faa'iideysanaya xirfadaha jinni iyo jinsi ahaantiisa. Inuu gudbiyo irdaha jahannamada, wuxuu ugu dambayntii ku qasbanaan doonaa inuu go'aan ka gaaro meesha uu ku yaal."
Marka aadan tagin inaad shaqeyso Jimcaha ...
Qalabka Dabaysha ee Devil's on the Steam:https://t.co/aWmmJi9NSB#Indiegame #Indiedev #Indiegamedev @DH #Actiongame #hacknslash #Gaming #PS4 #Playstation #Xbox #XboxOne @LayopiGames pic.twitter.com/X4T0VL60BU
- 1C Entertainment (@1C_Company) April 5, 2019
Ka dib markii la sii daayo demo ah GDC iyo Pax East 2019 2019, Devil ee Hunt ugu dambeyntii waxay muujinaysaa in ciyaartoyda adduunka oo dhan in video ah gameplay ugu horeysay. Sidii la filayay, code ka mid ah Devil ah laga yaabaa in la weeraro dhowr ah, xirfadaha iyo awoodaha qayli. liisanka cusub eegaynaa, inkastoo madadaalada iyo muujiyo in Games saamaynta Layopi ma ciyaaro AAA barxadda dhabta ah. In mas'uul ka ah daabacaadda, Company 1C ku dhawaaqay jiritaanka subtitles af Faransiis, waayo, Devil ee Hunt.
Devil's Hunt: daqiiqadaha 18 ee ciyaarta
Mortal Kombat 11: Cetrion wuxuu soo bandhigay muuqaalka muuqaalkiisa
MASHRUUCA HOOSE: waxqabad-RPG AAA adigoo isticmaalaya studio
Nintendo Direct: bandhigid cusub ayaa la filayaa toddobaadkan
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/devils-hunt-le-devil-may-cry-polonais-de-layopi-games-312199
Kaaliyaha Google: Lenovo Smart Display ee iibinta Faransiiska laga bilaabo 179 €
Pixel 3 ayaa xaqiijiyay Google
Kalluumeysiga Endgame wuxuu filayaa filimkaaga xitaa haddii uusan ahayn mid dhab ah - BGR
Aliko Dangote, oo ah ninka ugu qanisan Afrika.
Talooyin: Dhibaatooyin dheeraad ah oo dheeraad ah? Halkaan waxaad ka heleysaa talooyin ku saabsan dhuuntaada
Shan barnaamijyo mobile ah si ay u bartaan sida loo codeeyo - Talooyin
Brigitte Macron oo ku yaala sariirta line Line Renaud, oo ah labeenta meteo oo leh mashiinka ...